Amin'izao dia efa betsaka ny tolotra ataon'ireo tambazotra internet, misy aza ny manome 500 Mo, amin'ny vidiny ambany, na dia FB ihany aza no ampiasana azy ny an'ny sasany.
Matetika isika dia manana intenet amin'ny finday tsika, izay ny tambazotram-pivarotana afaka mametraka izany (installation) maimaimpoana any amin'ireo trano fivarotan'izy ireo, na amin'ny internet afaka jerena ihany koa.
Eto anefa isika te hampiasa ny ordi tsika na te hizara izany internet izany amin'ny fitaovana wifi maromaro.
Eto dia tél na pad androide na ireny efa tsaratsara ireny, tsy miresaka tél tsotra izany isika eto.
Araho ary ny fanazavana, ahoana no hizarana izany (Mety tsy mitovy tanteraka ny tél na Pad rehetra):
Mandeha isika ao amin'ny
- Réseaux et Partage
- Hotspot Wifi ( Io Hotspot io no fizarana ny intenet nao ao anaty phone, mba hivadika mpanome intenet wifi indray ilay tél na Pad nao)
- Configurer le hotspot ( na point d'accès Wifi ihany koa no iantsoana azy)
- Dia omeo anarana ny Wifi nao (io no antsoina hoe SSID)
- Cocher ilay hoe Diffuser le SSID, izany hoe atao hitan'ny appareil hafa izany izy. Rehefa parametrer ny ordi nao hitady io point d'accès wifi io, dia azonao décocher io avy eo mba tsy ho hitan'olon-kafa, amin'izay ialana ny hidiran'ny olona amin'io wifi nao io. Azonao avela amin'izao ihany koa anefa raha tsara ny code nao.
- Sécurité, ataovy WPA2 PSK
- Ampidiro ny mot de passe nao, ialao ny manao mot de passe tsotra kely toa ny daty naterahana...
- Azonao faritana ny isan'ny appareil farafaha-betsany afaka mampiasa ny wifi avy amin'ny tel-nao mba tsy ho lent, satria aza adino fa ny internet avoakan'ny phone-nao izany no ho tsinjaraina amin'ny appareil na ordi rehetra miditra aminy, ka raha misy mijery film youtube na manao telechargement izany dia mila misotro dité daholo vao mahasokatra page iray.
- Dia miverina isika any amin'ny paramètre, dia activer Données (Izany hoe alefa ny internet, manombaka eo dia miasa ny credit internet-tsika)
- Activer Hotspot (Amin'ny Pad na tél maro dia misy raccourci ery ambony daholo ireo activation Données sy Hotspot ireo, sitony midina avy ery ambony, dia misy menu mitranga eo, akisaho miankavia, miankavanana ilay menu ery ambony, fa ao izy matetika)
Vita aloha eo ny an'ny téléphone na Pad mpizara internet.
Tsara raha mampiasa puce 4G mba ho rapide kokoa ny internet. Tsy lafo ny puce 4G, azonao soloina any amin'ny tambazotranao izany, nefa tsy very ny numero tel nao. Izaho manokana dia aleoko mampiasa puce hafa mihitsy hanaovana internet fa tsy ampiarahina amin'ny numéro tel ampiasaina, efa betsaka izao ny phone double puce, ny iray fiantsoana, ny iray atao internet.Manjary vao misy appel na sms miditra dia mety hanapaka ny internet izany, na andany betterie ihany koa.
Vita izay ny mpanome internet, izao isika dia hiditra indray ahoana ny anaovana ireo ordi na pad na fitaovana hafa tiana andray ny internet.
- Activer wifi amin'ny ordi tsika, raha Tél na Pad no tiana andray dia mitovy amin'ny teo ihany
(Tokony ho hitanao eo ny anaran'ilay Hotspot wifi noforoninao tery ambony)
- Midira amin'iny, ka angataka aminao ilay code izy.
- Ampidiro ilay code noforoninao dia afaka mahazo internet ianao.
Mitovy amin'izay koa ny ordi portable na ordi misy wifi, midira amin'ilay icone ery ambany ankavanana akaikin'ny daty matetika, dia hitanao eo ilay SSID na ilay anaran'ilay wifi nataonao, dia ampidiro ny code, ataovy connexion automatique, amin'izay vao mila wifi ianao dia hitany.
Rehefa vita ny ilainao ny wifi, dia deconnecté ny Données sy ny Hostpot fa mandany batterie tél be izy io.
Ho antsika mipetraka any andafy, dia misy Hotspot gratuit daholo ny Gare Train, ny Restaurant, ny hôtel, Aéroport rehetra.
Dia mitovy tsy misy hafa raha te ahazo internet amin'izy ireny. Activer wifi ordi, dia jereo ao izay SSID na naran'ilay Hotspot, dia matetika izy mangataka inscription amin'ny voalohany, ary mety asiany Pub kely, izy no fivelomany, ary dia mety tapahany isaky ny 20 min mba tsy hibahana connexion ny olona tsy mampiasa intsony, fa activer indray mandeha indray dia mandeha foana.
Eto Madagascar, ny Cotisse dia mizara wifi any anatin'ny Taxibrousse-ny ihany koa.
jeudi, 23 novembre 2017 07:05
jeudi, 23 novembre 2017 07:02
Hello, how are the kids? http://www.edwithoutdoctor.org/ venereal infection
mercredi, 22 novembre 2017 21:31
mercredi, 22 novembre 2017 19:17
mercredi, 22 novembre 2017 18:15
mercredi, 22 novembre 2017 17:20
mercredi, 22 novembre 2017 05:02
mercredi, 22 novembre 2017 02:51